EMUI waxay horey u laheyd in kabadan 470 milyan oo isticmaale maalinle ah | Androidsis
EMUI waxay horey u laheyd in ka badan 470 milyan oo isticmaale maalinle ah
Huawei wuxuu ku jiray duudduuban dhawaanahan, Si dhakhso leh u fuulaya si ay u noqoto shirkadda labaad ee ugu casrisan adduunka isla markaana iibisa boqolaal milyan oo taleefannada casriga ah adduunka oo dhan sannadihii la soo dhaafay, taas oo, ay weheliso inta badan mobilada Honor, ay maamusho EMUI, oo ah shirkad daaha laga beddelo.
EMUI, dhanka kale, ayaa sidoo kale la dedejiyey koritaanka. Waxay hadda leedahay ku dhowaad 500 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon maalintii!
Munaasabad warbaahineed shalay, Madaxweynaha Shirkadda Huawei ee Consumer BG Software Dr. Wang Chenglu ayaa shaaca ka qaaday in EMUI waxay dhaaftay 470 milyan oo isticmaale maalinle ah. Ilaa hada, nidaamka ku shaqeeya Android-ka waxaa lagu heli karaa 77 luqadood iyo 216 gobol.
Ka dib markii uu siiyay tirooyin muhiim ah oo ku saabsan lakabka soo-saaraha soo-saaraha, Dr. Wang wuxuu mar kale ku adkeeyay ballanqaadka Huawei ee hagaajinta. Wuxuu sheegay qaar kamid ah horumarada la taaban karo ee daabacaadyadii udambeeyay ee EMUI, sida tiknoolajiyada GPU Turbo ee EMUI 8.2, Link Turbo oo leh EMUI 9.0, iyo xitaa Huawei Arca Compiler cusub ee cusbooneysiinta EMUI 9.1. Soo bandhigida wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay horumarka uu nidaamka qalliinka soo maray sanadihii la soo dhaafay.
Iyadoo shixnadda Huawei ay ka soo degtay in ka badan 59 milyan oo unug oo taleefannada gacanta ah rubucii ugu horreeyay ee sannadkan, shirkadda ayaa lagu wadaa inay jebiso bartilmaameedka guud ee 250 milyan oo shixnad ah sanadka. Maaddaama taleefannada casriga ah ee Huawei iyo Honor ay aad u soo bateen suuqa, EMUI waxaa la filayaa inay si dhakhso leh u koraan sanadaha soo socda.
Dhawaan lakabku wuxuu hirgelin doonaa shaqooyin badan iyo horumarin, tan iyo Huawei waxay dooneysaa inay kordhiso tirada dadka isticmaala adduunka, tanna waa lagama maarmaan in lagu dhex abuuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » EMUI waxay horey u laheyd in ka badan 470 milyan oo isticmaale maalinle ah
Google ayaa bilaabi doonta nooc ka mid ah Android Oreo oo loogu talagalay taleefannada fudud